BACAADWEYNE OO HAAWANAYA IYO CIIDANKII JOOGAY OO CAGAHA WAX KA DAYAY. – Shabakadda Amiirnuur
April 15, 2021 7:41 am by admin Views: 199
Ciidamadii Dowladda Federaalka ee ku suganaa Deegaanka Bacaad weyne e Gobalka Mudug ayaa Xalay Cagaha wax ka dayay waxana u kala carareen Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado ee Gobalada Mudug iyo Galgaduud.
Ciidamadaan oo watay 21 Gaari oo kuwa dagaalka ah ayaa ka baqay in Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar ku soo qaado dabeedna ay cagta mariso oo ay gebigoodba dhegta dhiiga u darto Gaadiidka iyo huba at wataana ka farato.
Ciidamadaan ayaa Xaaladoodu yara xasishay oo neefku ka soo fuqday Markii ay gaareen magaalooyinka ay u caraeen oo ay aaminsan yihiin in Amni ahaan ay ka roon yihiin halka ay ka soo tageen.
Ciidamada Xarakada Shbaabul Mujaahdiin ayaa kaabiga ku haya Deegaanka Bacaad weynee Koofurta Gobalka mudug halkaas ooa y malamahaan dhaqdhaqaaqyo ka wadeen.
horay Bacaadweyne waxaa uga dhacay Dagaalo kala duwan oo lagu laayay Ciidamo ka tirsanDowladda Federaalka ah kuwa kalena lagu dhaawacay Gaadiid dagala iyo hub kala duwan ay ku furatay Xaraakda Shabaabul Mujaahidiin.
Bulshada Deegaanka Bacaadweyne ayaa aad u hadal haya Ciidamadii Goobta degaanaa ee Cararay kawaasoo markii hore ka dalbanayay in ay garab ugu noqdaan Dagaalka ak dhanka ah Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
goob jooge ku sugna Koofurta Gobalka Mudug oo aan la xariirnay ayaa inoo sheegay in Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weli aysan deegaanka gelin hase ahaatee aanay ka fogeyn welow aanay cadeyn in ay Xarakadu halkaa la wareegi doonto iyo in kale.